[14 / 10 / 2019] SAU မှ Academician မှ Sakarya အတွက်မီးရထားစနစ်အကြံပြုချက်များ	54 Sakarya
[14 / 10 / 2019] Diyarbakır Batman ခရီးသည်တင်ရထားပေါ်မှာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်	21 Diyarbakir
[14 / 10 / 2019] Haydarpaşaနှင့် Sirkeci ဘူတာများအတွက်တင်ဒါခေါ်ရန် IMM မှကန့်ကွက်ခြင်း	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[14 / 10 / 2019] Izmir ရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် E-City ကာလ	35 Izmir
[14 / 10 / 2019] Metrobuses မှဒေါ်လာသန်းချီသည့်အမြတ်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[14 / 10 / 2019] တံတားနှင့်ကားလမ်းမှယိုစိမ့်သည့်အထိပြင်းထန်သောခြေရာခံခြင်း	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[14 / 10 / 2019] CHP Tanal: 'Söğütlüçeşme YHT ဘူတာအတွင်းပိုင်းဖုန်သံချေးများ'	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[14 / 10 / 2019] Adapazarıရထားသည်Haydarpaşaသို့သွားသင့်သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[14 / 10 / 2019] Ramadan ပွဲမတိုင်မီ Ankara Sivas YHT လိုင်းဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်	06 တူရကီ
[14 / 10 / 2019] Kocaeli ရှိ 365 ဘတ်စ်ကားလိုင်းကိုဤအရပ်မှနောက်လိုက်သည်	41 Kocaeli
Homeတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ09 AydinNazilli စက်လှေကား၌ပြစ်မှားမိခံရဖို့ TCDD ဘူတာရင်ပြင်ဉမင်လိုဏ်ခေါင်း
Nazilli စက်လှေကား၌ပြစ်မှားမိခံရဖို့ TCDD ဘူတာရင်ပြင်ဉမင်လိုဏ်ခေါင်း
01 / 03 / 2019 Levent Elmastaş 09 Aydin, ရထားလမ်း, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
အဆိုပါဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းရှိရီပတ်ဘလီကန်ခရိုင်ကျင်းပလိမ့်မည်သည့်ရပ်ကွက်အတွင်း Altintas TCDD ဘူတာရင်ပြင်, ချိတ်ဆက် Nazilli မြို့တော်ဝန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း Haluk လက်ခံရရှိသူနှင့် Cumhur မဟာမိတ်အဖွဲ့မိတ်ဖက်, စက်လှေကားဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်လက်ခံရရှိသူ Haluk Özmenအတူဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းရီပတ်ဘလီကန်ခရိုင်အကြီးအကဲ Mehmet, နုမတ်လတွင်ကျင်းပပါလိမ့်မည်ကြေညာ။
အကြီးအကဲ Mehmet Ozmen ရုံနှစျခုရပ်ကွက်, လူအပေါငျးတို့မကြာခဏ4နှစ်မတ်လ Herald အတွက်တင်ဒါမှထွက် သွား. မယ်လို့အကြားရွေးကောက်ပွဲကတိတော်များကိုယူသောစက်လှေကား၏ Haluk လက်ခံရရှိသူအားရှင်းလင်းထားသည့်ရန် '' ဉမင်လိုဏ်ခေါင်း '' ဘာသာရပ်ကိုရည်မှတ်အရေးပါတဲ့စီမံကိန်းကို Nazilli ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမဟုတ်ပါဘူး။ လက်ခံရရှိသူ, တာကနိုင်ငံတော်မီးရထား၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုတွေ့ဆုံမေးမြန်း၏ရလဒ်စီမံကိန်းများ 2,5 သန်းတန်ဖိုးရှိနုဇာတ်စင်လာရန်ကဆိုသည်။ နေ့တိုင်းလူများနှင့်လက်ခံရရှိသူကိုဖော်ပြနိုင်ရန်စခန်း Square ကိုဖန်ဆင်းစက်လှေကားဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအဆောက်အဦများအနားမှာရှောက်သွားကြောင်းရထားများစွာရာပေါင်းများစွာ, "စက်လှေကားပေါ် TCDD သဘောတူညီချက်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ အဖြစ်မကြာမီအလုပ်အဖြစ်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မသန်စွမ်းသူများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုရည်မှတ်, ဒီစီမံကိနျးကိုငါတို့အဘို့အကအရမ်းအရေးကြီးပါတယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
ကျွန်တော်စက်လှေကားစီမံကိန်းကိုလေ့လာသင်ယူရန် '' ဉမင်လိုဏ်ခေါင်း '' ဂရုစိုက်အရှိဆုံးကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသည်နုဇာတ်စင်ရောက်ရှိသူတို့ကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ Mukhtar Mehmet Ozmen နှင့်အတူတိုင်ပင်၌ပြစ်မှားမိခံရဖို့အလုပ်မလုပ်နိုင်သောဖျောပွသညျမိမိသက်တမ်းကာလအတွင်းရပ်ကွက်အတွင်းနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စများ, ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အတွင်းနှင့် Nazilli Aydin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ရှိသမျှကိုစည်ပင်သာယာဝန်ထမ်းများ, မြှို့နယ်၏အထူးသဖြင့်သမ္မတကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်း၏ပျော်ရွှင်ဖြစ်ပြောနေကြပါတယ်ဘူတာ Square ကိုမြို့တော်ဝန် Haluk လက်ခံရရှိသူနှင့် Mukhtar Mehmet Ozmen ကျေးဇူးတင်ယင်းရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်သူများအတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်လိမ့်မည်, သူကသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်အောင်မြင်မှုစေလိုကြောင်း။ (အဆိုပါ Sesgazete)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Ankaray နှင့် Metro ရထားစီးပွားရေး Depot, ဘူတာစက်လှေကားလူသွားစင်္ကြ Moving ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးဓါတ်လှေကားနှင့်မသန်စွမ်းန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေးစီးပွားရေးကိုနူးညံ့၏နှစ်ပတ်လည်ကို Maintenance-ပြုပြင်ခြင်း၌တွေ့ 30 / 10 / 2012 ပြုပြင်ရေးစခန်းစက်လှေကားမှာတွေ့ရှိရထားစနစ်များဦးစီးဌာန Ankaray နှင့်မီထရိုစီးပွားရေးဂိုဒေါင်၏ Egon အထွေထွေညွှန်ကြားမှုမသန်စွမ်းလူသွားစင်္ကြ Moving BE နှင့်နှစ်ပတ်လည်ကာလအပိုင်းအခြားကို Maintenance ပြုပြင်ခြင်းန်ဆောင်မှုများ 4734 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်န်ဆောင်မှု 19 ရေတွက်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစီးပွားရေးပစ္စည်းဝယ်ယူရေး hoists မညျ အဆိုပါက Metro အိမ်ခြံမြေလေလံအတူ edilecektir.ankaray နှင့်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2012 / 153513 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ရဲတပ်ဖွဲ့အိမ်နီးချင်း Hippodrome Caddesi အဘယ်သူမျှမ:5Blok Kat:2YENİMAHALLEတူရကီ Yenimahalle / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့် ဖက်စ်နံပါတ်: 3125071087 - 3125071330 က c) ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကို Maintenance & ပြုပြင်ခြင်းန်ဆောင်မှုများလက်ခံရရှိလိမ့်မည် (ANKARAY နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမီထရိုဘူတာစက်လှေကားမှာတည်ရှိပါတယ်, မသန်စွမ်းလူသွားစင်္ကြရွှေ့နှင့်ဓာတ်လှေကား၏ဝန်) 26 / 06 / 2014 ကို Maintenance နှင့်ဝန်ဆောင်မှု Repair ရထားလမ်းစနစ်ဌာန ANKARAY ၏အတ္တအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်မီထရိုအိမ်ခြံမြေစခန်းများ, မသန်စွမ်းသူများနှင့်ကုန်တင်ဓာတ်လှေကားထဲမှာစက်လှေကားတွေ့အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကန်ဆောင်မှု 4734 ရေတွက်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေ 19 ၏ဖို့အတွက် walkway (Band) ကို Maintenance နှင့်ပြုပြင်ခြင်းန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစီးပွားရေးပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရွေ့လျားပါလိမ့်မည် ဒါဟာတင်ဒါလိမ့်မည်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2014 / 56969 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ရဲတပ်ဖွဲ့အိမ်နီးချင်းပြိုင်ကားကွင်းရိပ်သာလမ်း Blok အဘယ်သူမျှမ:506330 ။ YENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3125071087 - 3125071330 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: ali.altuner@ego.gov.tr ​​...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကို Maintenance နှင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် Repair (ANKARAY စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် Business ဂိုဒေါင်လမ်း, ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးဓါတ်လှေကားနှင့်မသန်စွမ်းလမ်းလျှောက်ခြင်း, တူရကီက Metro ဘူတာနှင့်လှေကား၌ပါရှိသောရွေ့လျား) 01 / 11 / 2016 ကို Maintenance နှင့်ဝန်ဆောင်မှု Repair ရထားလမ်းစနစ်ဌာန ANKARAY အုပ်ချုပ်ရေး (A1 လိုင်း) နှင့်တူရကီက Metro စီမံခန့်ခွဲမှု (M1, M2, M3 Lines) ဂိုဒေါင်၏အတ္တအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးလက်ခံရရှိပြီးမသန်မစွမ်းပလက်ဖောင်းနှင့်အတူလမ်းမ (Band), မသန်စွမ်းသူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးဓါတ်လှေကားလမ်းလျှောက်, ဘူတာရုံမှာစက်လှေကားကိုတွေ့ပါလိမ့်မည် န်ဆောင်မှုများလစဉ်ကို Maintenance နှင့်ပြုပြင်ခြင်းန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေးဝယ်ယူရေးပြည်သူ့ဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2016 / 431474 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ရဲတပ်ဖွဲ့အိမ်နီးချင်းပြိုင်ကားကွင်းရိပ်သာလမ်း Blok အဘယ်သူမျှမ:506330 ။ YENİMAHALLE / တူရကီ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တူရကီက Metro Inns စက်လှေကား, လမ်းမကို Maintenance Moving နှင့်ဝန်ဆောင်မှုAlınacaktır Repair 31 / 07 / 2017 လမ်းမကို Maintenance Moving တူရကီက Metro Inns စက်လှေကားနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဘူတာရုံကာလအပိုင်းအခြားကို Maintenance နှင့်ပြုပြင်ခြင်းန်ဆောင်မှုများမှာတွေ့ရှိစက်လှေကားနှင့်ဓာတ်လှေကား၏လူသွားစင်္ကြ (Band), Cable ကိုကားလိုင်း (T1 လိုင်း) လ Moving, ရထားလမ်းစနစ်ဌာနတူရကီက Metro စီးပွားရေးစက်လှေကား၏အတ္တအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် Repair န်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေးစီးပွားရေးဝယ်ယူရေးပြည်သူ့ဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 347049 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ရဲတပ်ဖွဲ့အိမ်နီးချင်းပြိုင်ကားကွင်းရိပ်သာလမ်း Blok အဘယ်သူမျှမ:506330 ။ YENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းများနှင့် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဘိန်း Fields ဘူတာနှင့်စက်လှေကားနဲ့ဓါတ်လှေကားYaptırılacaktırအတွက်ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအကြား 12Peron Peron 06 / 08 / 2018 12Peron Peron ဘိန်းကွင်းဆင်းဘူတာနှင့်လှေကားနှင့်ဓာတ်လှေကား STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)7၏Yaptırılacaktırသမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေဒါရိုက်တာအကြားဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းလမ်းလျှောက်။ ဒေသန္တရရုံးပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 1 အပိုဒ်အရသိရသည်စက်လှေကားနှင့်ဓာတ်လှေကားအပေါ်ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအကြား2Peron နှင့် 4734 Peron အတွက်ဝယ်ယူခြင်းနှင့် Inventory CONTROL ဆားဗစ်မန်နေဂျာ Afyon ဘူတာ Yard သဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 19 အမှတ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 389205 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Alicetinkaya Mah ။ Silom လမ်း CAD ။ အမှတ်2/ 1 03030 GAR AFYONKARAHISAR ...
Mersin Metro စီမံကိန်းအသေးစိတ်
SAU မှ Academician မှ Sakarya အတွက်မီးရထားစနစ်အကြံပြုချက်များ
Diyarbakır Batman ခရီးသည်တင်ရထားပေါ်မှာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်
Haydarpaşaနှင့် Sirkeci ဘူတာများအတွက်တင်ဒါခေါ်ရန် IMM မှကန့်ကွက်ခြင်း
Izmir ရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် E-City ကာလ
Evidea သည် 110 စတိုးဖြင့် E-Commerce အောင်မြင်မှုကိုသရဖူဆောင်းမည်
CHP Tanal: 'Söğütlüçeşme YHT ဘူတာအတွင်းပိုင်းဖုန်သံချေးများ'
Ramadan ပွဲမတိုင်မီ Ankara Sivas YHT လိုင်းဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်
Kocaeli ရှိ 365 ဘတ်စ်ကားလိုင်းကိုဤအရပ်မှနောက်လိုက်သည်
အဆုံးသို့ချဉ်းကပ်သော Ankara Sivas YHT လိုင်း! ..
Hyperloop ရထားကို 2040 မတိုင်မီအထိဖွင့်လှစ်ရမည်
Cappadocia Hot Air လေကြောင်းလိုင်းလေဘောလုံးပျံသန်းမှုဖို့အစီအစဉ်၏တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းစမ်းသပ်
BTSO ၏ Vision Project GUHEM အဆင့်မြင့်အလည်အပတ်ခရီး
17: အောက်တိုဘာလ 10 00 @ - 11: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Ankaray နှင့် Metro ရထားစီးပွားရေး Depot, ဘူတာစက်လှေကားလူသွားစင်္ကြ Moving ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးဓါတ်လှေကားနှင့်မသန်စွမ်းန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေးစီးပွားရေးကိုနူးညံ့၏နှစ်ပတ်လည်ကို Maintenance-ပြုပြင်ခြင်း၌တွေ့
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကို Maintenance & ပြုပြင်ခြင်းန်ဆောင်မှုများလက်ခံရရှိလိမ့်မည် (ANKARAY နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမီထရိုဘူတာစက်လှေကားမှာတည်ရှိပါတယ်, မသန်စွမ်းလူသွားစင်္ကြရွှေ့နှင့်ဓာတ်လှေကား၏ဝန်)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကို Maintenance နှင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် Repair (ANKARAY စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် Business ဂိုဒေါင်လမ်း, ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးဓါတ်လှေကားနှင့်မသန်စွမ်းလမ်းလျှောက်ခြင်း, တူရကီက Metro ဘူတာနှင့်လှေကား၌ပါရှိသောရွေ့လျား)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တူရကီက Metro Inns စက်လှေကား, လမ်းမကို Maintenance Moving နှင့်ဝန်ဆောင်မှုAlınacaktır Repair
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဘိန်း Fields ဘူတာနှင့်စက်လှေကားနဲ့ဓါတ်လှေကားYaptırılacaktırအတွက်ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအကြား 12Peron Peron
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Izmit ကောင်းစွာစုဝေးကြလိမ့်မည်သည့်မီးရထားဘူတာရုံစက်လှေကားနှင့်ဓာတ်လှေကား၏ဖွင့်ပွဲနှင့်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရေးအဘို့
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တူရကီက Metro ဘူတာနှင့် Ankaray မသန်စွမ်းအတွက်စက်လှေကားနှင့်လှေကားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ပြီးပြီချီ
Completed ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ပြုလုပ်ခြင်းတူရကီက Metro ဘူတာနှင့် Ankaray မသန်စွမ်းဓါတ်လှေကားထဲမှာစက်လှေကားနှင့်လှေကား
မသန်မစွမ်းချဉ်းကပ်လမ်းပေါ် Mamak အတွက်ဆင်ခြေဖုံးဉမင်လိုဏ်ခေါင်းစေခဲ့သည်
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အ 12 1957 အောက်တိုဘာလHaliçသင်္ဘောကျင်းမရိန်းအခြေစိုက်စခန်းမှာတော့ ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ 11 1872 Rumeli မီးရထားလမ်း ...
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (230) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
'Pirelli P Zero' သည် BMW M8 အသစ်အတွက်တာယာများဖြစ်သည်
အသစ် BMW ကားစီးရီး 1 တူရကီရှိရောင်းချမည့်တက်ထားခဲ့ပါတယ်
Hyundai သည် Virtual Technology ကိုဒီဇိုင်းတွင်စတင်အသုံးပြုသည်
ပြိုင်ပွဲချန်ပီယံရှစ်မှ Kocaeli, တူရကီအသင့်ဖြစ်ပြီလား
ကော်မရှင်မှချမှတ်ထားသောSAMULAŞသို့အပိုဆောင်း 20 Million TL Capital တိုးမြှင့်ခြင်း
တူရကီတရုတ်မီးရထား Express ကိုထံမှဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်